बिमा कम्पनीहरुले साधारण सभा बोलाउन किन गर्दैछन् विलम्ब ?
काठमाडौं : अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७४ सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत २२ बिमा कम्पनीहरु मध्ये ७ वटाले अझै वार्षिक साधारण सभाको मिति तय गर्न सकेका छैनन् । यता, ३ बिमा कम्पनीले भने बल्लतल्ल साधारण सभाको मिति तय गरेका छन् । अहिलेसम्म अघिल्लो वर्षको साधारण सभा नगर्ने जीवन बिमा कम्पनीमा एसियन लाइफ, गुराँस लाइफ, नेसनल लाइफ र प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन् । त्यस्तै, सभा नगर्ने निर्जीवन बिमा कम्पनीमा एभरेष्ट इन्सुरेन्स, हिमालयन जनरल र एनएलजी इन्सुरेन्स रहेका छन् ।
कम्पनी ऐन अनुसार ‘पब्लिक’ कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरिसक्नुपर्छ । यदि ६ महिना भित्रमा नगरेमा आवश्यकता र औचित्य अनुसार थप ३ महिना भित्रमा सभा गरिसक्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले निर्देशन दिन सक्छ । थपिएको समयमा पनि साधारण सभा नगरेमा सेयरधनीले अदालतमा गएर मुद्दा समेत दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सेयरधनीको निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले साधारण सभा सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । साथै, कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा साधारण सभा गर्न नसकेमा चुक्ता पुँजीका आधारमा जरिवाना लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ । यद्दपि, लगानीकर्ताहरु यस्तो विषयमा अहिलेसम्म अदालतसम्म पुगेको घटना भने निकै कम छन् ।
यता, लगानीकर्ताहरुले भने नियामक बिमा समिति ‘मूक दर्शक’ बन्दा समयमा साधारणसभा नगर्न बिमा कम्पनीहरुले छुट पाएको आरोप लगाएका छन् । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले भने, ‘नियामक निकाय बिमा समिति मूक दर्शक बन्दा बिमा कम्पनीहरुले साधारण सभा समयमा नगरको बताए । उनले बिमा समितिलाई साधारण सभा नगर्ने कम्पनीहरुलाई तत्काल कारबाही गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
तर, बिमा कम्पनीहरुको साधारण सभा गर्ने समय घर्किसक्दा पनि नियामक निकाय बिमा समितिले भने यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमाण पौडेलले साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्ने तयारीमा आफूहरु नरहेको जानकारी दिए । नियामकको यस्तो भनाईबाट कम्पनीहरुलाई छुट दिइएको सहजै पुष्टि हुन्छ ।
लाभांशको आशामा लगानी गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भने समयमा साधारण सभा नहुँदा प्रतिफल पाउनबाट वञिचत भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर दोस्रो बजारको सेयर मूल्यमा पनि परेको उपाध्यक्ष फुल्लेल बताउँछन् । यो लगानीकर्तामाथिको सरासर अन्याय भएको उनको भनाई छ ।
यता, बिमा कम्पनीका पदाधिकारीहरु भने एनएफआरएस प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्नु परेको तथा बिमा समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन विभिन्न रणनीति तयार गर्नुपरेकाले साधारण सभा गर्न विलम्ब भइरहेको दाबी गर्छन् । तर यसको नाममा लगानीकर्ताले कहिलेसम्म धैर्य गरिरहने ? यो प्रश्नको भने उनीहरुसँग चित्त बुझ्दो जवाफ छैन ।
हालसम्म पनि साधारणसभा नगर्ने बिमा कम्पनीहरु :